2018 China fingotra fitaovana fampandrosoana - China Qingdao milina tapaka
Koa satria ny bottoming nivoaka tamin'ny 2016, ny fingotra Shina orinasa fitaovana hanatsara hatrany amin'ny taona 2017, ary roa-tarehimarika fitomboan'ny vola miditra amin'ny varotra, Mitana fitomboan'ny fanondranana vola, ary manan-danja eo amin'ny orinasa fitomboana profitability. Araka ny indostria Insiders, ny ao an-toerana sy vahiny kodiarana ireo orinasa mampiasa vola mavitrika, ary ny fitadiavana fingotra milina, indrindra fa avo-tsaina fingotra fametrahana mazava tsara milina, ny fanatsarana. Antenaina fa Shina fingotra fitaovana orinasa dia fomba ofisialy hiditra ny miakatra fantsona 2018.
fingotra milina orinasa 'varotra vola miditra nitombo be
Araka ny antontan'isa ny fingotra milina matihanina mpikambana ao amin'ny China Chemical Equipment Fikambanana, tamin'ny 2017, 24 lehibe fingotra fitaovana orinasa manerana ny tany nahatratra ny varotra fidiram-bola ny 7,735 miliara yuan, fiakarana 11.3%. Ny fampitahana, ny fitambaran'ny vola miditra varotra ao Shina ny orinasa fitaovana fingotra tamin'ny 2017 dia tokony hahatratra 10,65 miliara yuan, fiakarana 10.9%. Ity no taona voalohany nanjakan'i-on-taona fiakaran'ny vola miditra orinasa varotra hatramin'ny 2015.
Tamin'ny 2017, ny ankapobeny fandidiana tahan'ny Shina fingotra somary fitaovana orinasa dia ny hahavony, ary ny varotra ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny orinasa nitombo. Anisan'ireo 24 orinasa nanaovana fanadihadiana, dia nisy 15 ny varotra fitomboan'ny fidiram-bola, 8 pihilan'ny, ary ny ambony 10 fivarotana vola miditra dia 6,54 miliara yuan, nampamoahana an'i 61,4% ny fitambaran'ny varotra fidiram-bola, ary ny orinasa fitanana Nitombo 0,7%. Hery.
Tsara homarihina kokoa profitability
Tsy vitan'ny efa varotra fitomboana Mitana nampiditra harena ho tratra, fa ny mahasoa ny fitaovana fingotra Shina orinasa nitombo be ihany koa tamin'ny taona 2017 raha oharina amin'ny tamin'ny taona lasa, ary ny profitability ny orinasa nitombo be.
Mazava araka izany fa 24 fingotra fitaovana ireo orinasa rehetra, ka tsara tombony, sy ny fitomboan'ny tombony orinasa mandrafitra ny maro an'isa. Indrindra indrindra, ny profitability ny lisitra orinasa fingotra milina nihatsara be. Ohatra, ao amin'ny taona 2017, ny orinasa nahatratra ny tombony efa ho 93 tapitrisa yuan, raha mbola tamin'ny 2016 dia ny fahaverezan 'ny 770 tapitrisa yuan.
Araka ny indostria mpandalina, ny fiara-kery ho an'ny soa indrindra fitomboana dia ny fitomboan'ny baiko sy ny fanatsarana ny vokatra lehibe sisiny. Na izany aza, dia Tsara homarihina fa ny vidin'ny akora efa nitsangana mafy, izay efa mihena tombony sisiny.
Fanondranana ny fifanakalozana vahiny nitombo be
Araka ny antontan'isa, tamin'ny 2017, ny fanondranana fanaterana sandan'ny 24 fingotra milina orinasa ao Shina dia 1,836 miliara yuan, ny 32.3% taona-on-taona. Ny fampitahana, dia tombanana fa ny fanondranana tanteraka vidin'ny fingotra Shina orinasa fitaovana ho tonga US $ 360 tapitrisa tamin'ny 2017, herintaona-on-taona ateraky ny 20%.
Araka ny indostria mpandalina, ny fitomboan'ny vola miditra avy any ivelany fifanakalozana fanondranana dia indrindra indrindra noho ny zava-misy fa ny reraka Shina orinasa no namaly ny US "avo roa heny mpanohitra" sy nanorina reraka orinasa any Etazonia sy Azia Atsimoatsinanana. Ny fitadiavana fingotra no namorona milina kely fara tampony. Amin'izao fotoana izao, ny hafanam-po ao Shina Tyro orinasa hanorina orinasa mbola ferment ampitan-dranomasina. Araka ny antontan'isa savaranonando, mihoatra ny 10 Tyro tetikasa dia manomboka na mikasa ny hanomboka. Ankoatra izany, ny tsena iraisam-pirenena ny fampiasam-bola kodiarana dia miovaova, ary misy ny tetikasa fampiasam-bola bebe kokoa reraka any Continental sy Bridgestone, izay ihany koa ny mametraka ny fototra ho an'ny fanondranana ny fingotra milina ao Shina. Manantena ny orinasa fa ny fingotra Shina fanondranana fitaovana dia hanohy hanatsara tamin'ny 2018, sy ny ambaratongam-internationalization dia ho bebe kokoa kokoa.